सागको अर्थपुर्ण आयोजना आवश्यक छ : जिवनराम श्रेष्ठ (अन्तरवार्ता ) - Khelpati
मगलवार, जेठ ७, २०७६
बिहिवार, फाल्गुन २३, २०७५ खेलपाटी संवाददाता
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको मिति तेस्रो पटक सरेको छ । अर्थात दक्षिण एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ मेला अब सन् २०१९ को डिसेम्बर १ बाट १० सम्म नेपालमा हुनेछ । भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कारण देखाउँदै तेस्रो र सम्भवत अन्तिम पटक सागको नयाँ मिति तोकिएको हो ।
प्रष्ट छ, डिसेम्बरको नयाँ मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न नसकेमा नेपालले १३ औं सागको आयोजनाको अवसर गुमाउनेछ । दुई बर्षभित्र आयोजना गर्ने बाचा सहित नेपालले सन् २०१६ मा भारतबाट साग आयोजनाको झण्डा लिएर आएको थियो । तर पटक पटक नयाँ मिति तोक्ने र अन्तिममा समयमा विविध कारण देखाएर सार्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ ।
थाईल्याण्डको राजधानी बैंककमा यसै हप्ता सकिएको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकले सागको नयाँ मिति तोकेको हो । सरकारको प्रस्ताव अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठले बैठकबाट अन्तिम पटकलाई सागको नयाँ मिति तोक्न सफल रहे ।
उनै जिवनराम श्रेष्ठसंग साग आयोजनाका विविध पक्षसंग केन्द्रित रहेर खेलपाटीकर्मी हिमबिक्रम केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पटक पटक आयोजनाको मिति सार्ने प्रस्ताव लिएर साग काउन्सिलको बैठकमा प्रस्तुत हुदाँ तपाईलाई कत्तिको समस्या हुँदाेरहेछ ?
भारतमा १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता समापनको समय सरकारकातर्फबाट १३ औ सागको आयोजनाको जिम्मेवारी लिने बिषय आएको थियो । ओलम्पिक कमिटिलाई अगाडी बढ्नुस भनेर तत्कालिन खेलकुदमन्त्रीले भन्नुभएको थियो ।
नेपालमा आयोजना गर्ने गरि झण्डा लिनुपर्छ भनेर निर्णय भएको थियो । हामीले झण्डा लिएर आयौ तर प्राविधिक कारणले निर्धारित समयमा आयोजना गर्न सकेनौ । त्यसको पछाडी विगतको राजनीतिक अस्थिरता र तयारीमा तत्कालिन मन्त्रीले खासै पहल गर्ने अवस्था समेत भएन । सोही कारण निर्धारित समयमा आयोजना गर्न सकिएन ।
तर अब देशमा नयाँ संविधान, नयाँ सरकार र स्थिर सरकार बनेको छ । सबै कुरा स्थिरतातर्फ अगाडी बढेको छ । व्यवस्थित तरिकाले काम अघि बढेको छ । मन्त्रालयले समेत विशेष चासो दिएर तेस्रो पटक हामी गर्न सक्छौ भनेर सरकारको प्रतिबद्वता जनाएको थियो । हामीसंगै बसेर एनओसी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र राखेपले छलफल ग¥यौ । सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर सेप्टेम्बरसम्म सार्न सचिवालयबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई पत्राचार भएको थियो । सेप्टेम्बरमा गर्दा हुने अवस्थामा समेत विश्लेषण भयो ।
अब निर्धारित गरेको मितिमा गर्नेपर्छ भन्ने निष्कर्श सहित नेभेम्बर र डिसेम्बरमा लैजाने सहमती बनेको थियो । तयारीको काम सेप्टेम्बर अगाडी सकाउने र बाँकी काम नोभेम्बर डिसेम्बरमा सकाउने निष्कर्शमा पुग्यौ । सोही अनुसार वर्तमान मन्त्रीले साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकलाई पत्र लेखेपछि दिनुभयो । त्यसको आधारमा नयाँ मिति तोक्ने काम गरेका छौ ।
प्रस्ताव जादा निकै छलफल गर्नुपर्यो । अरु देशले सार्ने कुरा सहज मानिरहेको अवस्था थिएन । अर्को कुरा सारिसकेपछि फेरी हुने कुराको सुनिश्चितताको बिषयमा आशंका उठेको थियो । तर मन्त्रालयका पत्र, अहिलेसम्म तयारीका पक्ष, भौतिक पुर्वाधारका बिषय र राजनीतिक स्थिरताका बिषयमा हामीले छलफल गरेर विश्वास दिलाउने काम ग¥यो । नयाँ मिति डिसेम्बर १ देखि १० सम्म आयोजना गर्ने सक्छौ भनेर विश्वस्त बनाएपछि बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।
२०७२ सालको भुकम्प पछाडी नेपालका धेरै भौतिक पुर्वाधार ध्वस्त भएका थिए । खेलकुदका अधिकांश पुर्वाधार क्षतिग्रस्त थिए । यस्तो अवस्थामा किन साग आयोजनाको जिम्मेवारी नेपालले लिएको हो ?
हाम्रो देशमा हुने ठुलो खेलकुदको मेला भनेकै साग हो । यो खालको ठुलो समारोहमा नेपालमा हुदैन । सागको डिजाईनर नेपाल हो । नेपालनै दक्षिण एसियामा खेलकुद गर्ने सोच र संगठित गर्ने कामको सुरुवात नेपालले गरेको हो । १९८४ मा पहिलो साग आयोजना गरेको हो । दोस्रो पटक १९९९ मा आठौं साग काठमाडौंमा आयोजना गरेका थियौ । यो तेस्रो पटक हामी आयोजना गर्दैछौ ।
यो हाम्रो देशको प्रतिष्ठा र ईज्जतसंग जोडिएको छ । राष्ट्रको गौरव गराउने बिषयमा सागले भुमिका खेल्छ । यसको जुन सन्देश अन्तराष्ट्रिय जगतमा दिन्छ, त्यो महत्वपुर्ण छ । लामो समय नेपालले द्वन्द ब्यहोर्यो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको नकारात्मक छवीलाई सागले मेटाउने काम गर्छ । राष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठामाथि उठाउने कुरामा यसले भुमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ । सोही कारण यसको आयोजनाको महत्वपुर्ण छ ।
दुई दुई पटक मिति तोकेर समेत समयमै प्रतियोगिता आयोजना नहुनुको मुख्य कारण के हो ?
मुख्य कारण भनेको पुर्वाधार निर्माणनै हो । भौतिक पुर्वाधार नभएसम्म अरु कुराको तयारी गरेर कुनै अर्थ रहदैन ।
रंगशालाको काम समयमा सम्पन्न नहुदाँ प्रतियोगिताको बाँकी काम प्रभावित भयो भन्ने बिषय कत्तिको सत्य हो ?
ठुलो खेल आयोजना गर्दा उद्घाटन र समापन गर्ने खेलस्थल महत्वपुर्ण छ । प्रतियोगितालाई स्तरीय र आकर्षक बनाउन राम्रो रंगशालामा हामीलाई आवश्यक थियो । त्यो निर्माणको काम निकै सुस्त भयो । संगै अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम समयमा नहुदाँ यो पछाडी सरेको हो ।
ठुलो खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा राज्य गम्भिर नबन्दा साग चपेटमा परेको हो ?
ठ्याक्कै त्यसो भन्न मिल्दैन । जुन दिन हामीले झण्डा लियौ, सबै कुरा गम्भिरतापुर्वक लिएर काम गरेको भए निर्धारित समयमा आयोजना हुने थियो । तत्कालिन समयमा हामी राजनीतिक रुपमा निकै अस्थिर अवस्थामा रह्यौ । झण्डा लिएपछि हाम्रो चार पटक सरकार परिवर्तन भयो । चार खेलकुद मन्त्रीलाई हामीले देख्यौ । सोही कारणले प्रतियोगिता समयमा हुन नसकेको अवश्य हो ।
तर नयाँ चुनावपछि स्थिर सरकार बनेको छ, सरकारले यो कामलाई सम्पन्न गर्नपर्छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठासंग जोडिएको बिषय भएकाले यो सरकारको जिम्मेवारी हो । अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठासंग जोडिएको बिषयलाई अहिलेको स्विकार गरेको छ, गम्भिर हिसावले लिएको छ । छलफल गरेर नयाँ मिति तोकेका छौ, अब फरक पर्ने स्थिती छैन ।
तोकिएको नयाँ मितिमा प्रतियोगिता आयोजना हुने आधार के ?
हामी राजनीतिक स्थिरतामा छौ । सरकारको मुख्य उद्वेश्य भनेको समृद्वि हो । सरकार अन्तराष्ट्रिय लगानी गर्न प्रयासरत छ । त्यसको एक पाटोको रुपमा सागलाई प्रयोग गर्न सक्छौ । सरकार सकारात्मक सन्देश दिन चाहिरहेको छ । सन्देश प्रवाह गर्ने कुरामा सरकारले खेललाई अभिन्न अंकको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
वर्तमान सरकारले सागलाई लिएर जुन किसिमको जिम्मेवारी बोध गरेको छ, हामी आशावादी हुन सक्छौ । प्रधानमन्त्री सागको निरिक्षण समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, खेलकुद मन्त्री तयारी समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत तयारीको बिषयमा चासो राख्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले समेत आठौं र सागलाई लक्षित गर्दै बजेटको कमी हुन हुदैनौ भन्नुभएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा खेलकुद क्षेत्र परेको छ । सोही कारण जुन नयाँ मिति तोकेका छौ, त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण छैन ।
नयाँ मिति तोकेपछिका चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
हामीले समयमा भौतिक पुर्वाधारलाई सम्पन्न गर्ने कुरा महत्वपुर्ण छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता भएका कारणले अन्तराष्ट्रिय स्तरका पुर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । खेल स्थलको तयारी, प्रतियोगितामा प्रयोग हुने खेल सामाग्रीको व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्ष र नतिजाको व्यवस्थित रेकर्डका निम्ति राम्रो तयारी गर्न आवश्यक छ । बसोबास, यातायात र सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आफ्नै देशमा आयोजना हुने भएकाले नेपालले प्राप्त गर्ने नतिजामा समेत बिशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । सबै काम संगसंंगै अगाडी लैजान पर्छ । सबै चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । सरकारले आर्थिक पक्षको प्रतिबद्वता गरेको छ । आर्थिक रुपमा समस्या नरहँदा अन्य पाटोमा गम्भिर भएर लाग्नपर्छ । सागलाई स्तरीय र सम्झना योग्य खेलकुद प्रतियोगिता बनाउन सक्छौ ।
सागको ईतिहास हेर्दा प्रतियोगिता नियमित हुन सकेको छैन । तपाई आफै सागको ओलम्पिक काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसको निमित्त कस्तो पहल भईरहेका छन् ?
हामी छलफलमा छौ । हामीले संगसगै वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौ । सागको विधानमा एक दुई वटा संशोधन बाहेक हामीले समय सापेक्ष गर्न सकेका छैनौ । अब हामीले नयाँ ढङ्गलाई सोच्नुपर्छ भन्ने छ । सागलाई कसरी नियमित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको छ ।
ओलम्पिकको वरियतामा हेर्दा हाम्रो क्षेत्र निकै पछाडी छ । सागनै हाम्रो लागि ओलम्पिक जस्तो हो । तर उन्नत खेलाडी तयार गर्न आधारभुत खेलको रुपमा यसलाई लिनपर्छ । सागनै एसियन गेम्सको तयारी र एसियन गेम्सनै ओलम्पिक गेम्सको तयारीको रुपमा हामीले लिन आवश्यक छ । आयोजनाको लागि आयोजना भन्दा अर्थपुर्ण आयोजनाको गर्नपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक छ । सागलाई एसियन र ओलम्पिकको लागि खेलाडी विकासको श्रृङ्खला बनाउने तहबाट छलफल भईरहेको छ ।
दुई बर्ष भनेपनि समयमा आयोजना हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा साउथ एसियामा नियमित हुन नसकेको हो । यसलाई दुई बर्ष भन्दा समेत चार बर्षमा आयोजना गर्ने बिषयमा छलफल भईरहेको छ । आयोजनाको जिम्मेवारी दिदाँ सरकारसंग सम्झौता गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
ठुला देशले खेल महोत्सवलाई आफ्नो देशको विकास र समृद्वि देखाउने अवसरको रुपमा लिन्छन् । भर्खरै राजनीतिक अस्थिरतबाट बाहिर निस्किएको नेपालले सागबाट के देखाउँछ सक्छ ?
दक्षिण एसियाको भुभागमा हामीले खेलको माध्यमबाट भातृत्व, शान्ति र सद्भावको सन्देश सुरु गरेको छौ । नेपालनै यसको सुत्राधार हो । खेल महत्वपुर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास भएको छ । यो अब जित्ने, हार्ने मात्र बिषय रहने, यसले बोक्ने र खेल्ने भुमिका भनेको देशबीचको मनमुटावलाई हटाउने काम गर्छ । उसले भातृत्वको अवस्था कायम गर्ने र द्वन्दलाई निराकरण गर्न भुमिका खेल्छ ।
सागको आयोजनाबाट बिषयले विश्व समुहायलाई नेपालले दिन सक्ने सन्देश के हो ?
नेपाललाई चिनाउने कुरा महत्वपुर्ण हो । खेलको माध्यमबाट नेपाललाई विश्व समुदायमा चिनाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सकिन्छ । नेपालको सगरमाथा, बुद्वको जन्मभुमी र यसको प्राकृतिक स्रोत साधानको सम्भावनालाई देखाउने काम गर्न सकिन्छ । हामी लामो समय द्वन्दमा रह्यौ । संसारभर नेपाल अस्थिरता छ, द्वन्द छ भन्ने नराम्रो सन्देश गएको छ । तर देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसंगै अघि बढेको विकास र समृद्विलाई हेर्न, सिक्न र बुझाउनका लागि साग प्रतियोगिता महत्वपुर्ण छ । नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश समेत हामीले दिन सक्छौ ।
भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् :
जेरुड थप एक सिजन चेल्सी मै रहने
विश्वकपका लागि पाकिस्तानको जर्सी सार्वजनिक
कौस्तुभ कप बिहीबारदेखि
मिडिया कप फुटसलको सेमिफाइनल समिकरण पुरा